Shiinaha Model No: Shiinaha Soosaarka Automatic Control YDJ Taxanaha Haydarooliga Iskaraabka Birta xiirista Baler Machine factory iyo alaab-qeybiyeyaasha | Midow Sare
Qaabeeyaan Maya: Soosaarida Shiinaha Si Toos ah Xakamaynta YDJ Taxanaha Kaydinta Qalabka Mashiinka Qalabka Baler
Taxanaha YDJ mabda'a shaqada mashiinka baler xiirista bir taxanaha ah:
1. Nidaamka Shear: bilow matoorka marka hore, kaxee bamka saliida si aad u rogto saliida, kadibna u dir sheyga meesha saxda ah. Riix batoonka xiirida, riix silsiladda maaddada, silloonkuna wuxuu si isdaba joog ah u socdaa si loo ogaado maaddada cadaadinta iyo xiirashada. Ka dib markii xiirashada la dhammeeyo, qalabka xambaarsan iyo saxaafadda ayaa ku soo noqonaya gobolkii asalka ahaa ee heeganka ahaa, iyadoo xiirashada ugu horreysa ay dhammaatay.
2, qaabka hawlgalka: adeegsiga dariiqa socdaalka ee labada dhinac loo xadido, laba istaroog oo xiirid ah ayaa si otomaatig ah loogu xidhi karaa, wareegga otomaatigga ah.
In ka badan 25+ sano oo waayo-aragnimo soo-saarka ah, oo siinaya habeyn ka badan 3000+ dejisaa nidaamyada dib-u-warshadaynta birta.
Faahfaahinta soosaarka ：
Mashiinka qashinka birta ah ee birta ah ee birta ah wuxuu leeyahay faa'iidooyin wanaagsan warshadaha dib-u-warshadaynta birta. Maalmahan, yaraanta ilaha dhaqaale ee la heli karo waa dhibaato dal kasta soo foodsaarta. Macno malahan wadamada soo koraya ama horumaray, sida loo sameeyo dib u warshadeynta ugu fiican had iyo jeer waa mowduuc kulul. Markaa waxaan u qaabeyneynaa dhammaan noocyada mashiinka xoqidda birta birta ah ee macaamiisha si ay ula macaamilaan birtooda duugga ah si ay ula kulmaan shuruudaha macaamiisheena.
Mashiinka qashinka birta ah ee birta ah, ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhammaan noocyada iftiinka iyo khafiifka ah, wax soo saarka iyo birta duugga ah, qaybaha qaabdhismeedka biraha fudud, dhammaan noocyada birta ah ee birta aan birta ahayn (birta birta ah, aluminium ka samaysan, naxaasta, iwm.) baakadaha isku xirka iyo xiirashada; Ama qashinka baakadaha si toos ah loo cadaadiyo.
Si ka duwan baalalleyda birta ah, mashiinkan qashinka birta ah ee birta ah ee hawo-wadaagga ah ayaa labadaba riixi kara oo xiirin kara birta duugga ah.
●Gawaarida Haydarooliga, qunyar socodka iyo buuq la'aan, xawaaraha xawaaraha xawaaraha, xoog balaaran ee faafin, dabool is haysta, ma fududa in lakala baxo.
Qaado saxanka birta caadiga ah iyo teknolojiyadda alxanka ee horumarsan, qaybaha farsamadu waa kuwo waara, heerka cillad yaraanta iyo nolosha muddada dheer.
System Nidaam qaboojiye ayaa loo rakibi karaa si loo hagaajiyo hawlgalka joogtada ah ee qalabka loona yareeyo heerka fashilka. Nidaamka qaboojinta waxaa loo qaybin karaa qaboojinta biyaha iyo qaboojinta hawada.
Shaabadda silsiladda waxay korsataa giraanta GRAI ee la soo dejiyey, taas oo leh waxqabad wanaagsan oo wax lagu xiro iyo caabbinta cadaadiska adag.
Installation Rakibid fudud, raad yar, aasaas la'aan, aasaas, iwm Hawlgal fudud, kala-goyn, qaab otomaatig ah.
Ext Qaboojiye qabow ma badalayo walxaha biraha wuxuuna hagaajiyaa heerka isticmaalka.
● Coefficient wuxuu ka sarreeyaa baakadaha dubbeyaasha dhaqanka, baakadaha farsamada, iwm.
●Xakamaynta otomaatiga ah ee PLC way fududahay in la shaqeeyo oo la ilaaliyo.
Machine Mashiinkayaga qashin-qubka birta ah ee birta ah ayaa kaa caawin kara inaad badbaadiso foosha, hagaajiso soo kabashada birta, kordhinta qiimaha iibka iyo hagaajinta faa'iidada.
Waxay kaa caawin kartaa inaad keydiso aagga shaqada, waxay faa'iido u leedahay maareynta goobta.
Li Macaamiisha way habeyn karaan tilmaamaha iyo cabbirka baakadaha iyadoo loo eegayo baahidooda gaadiid ama keydintooda.
● Waxay kaa caawin kartaa inaad yareyso kharashka gaadiidka, iyo inaad horumariso waxqabadkaaga shaqo
1. Nidaamka Shear: bilow matoorka marka hore, kaxee bamka saliida si aad u rogto saliida, kadibna u dir sheyga meesha saxda ah. Riix batoonka xiirida, riix silsiladda maaddada, silloonkuna wuxuu si isdaba joog ah u socdaa si loo ogaado maaddada cadaadinta iyo xiirashada. Ka dib markii xiirashada la dhammeeyo, qalabka xambaarsan iyo saxaafadda waxay ku laabanayaan meeshii ay markii hore ka joogeen, iyadoo xiirashada ugu horreysa ay dhammaatay.
2. habka hawlgalka: adeegsiga dariiqa beddelka safarka ee laba-xad loo maro, laba istaroog oo xiirid ah ayaa si otomaatig ah loogu xidhi karaa, wareegga otomaatigga ah.
Model Max Goynta Force (Ton) Cabbirka sanduuqa saxaafadda (mm) Xajmiga Bale (mm) Joogitaanka xiirista (jeer / daqiiqo) Awood (kw)
SOO IIBIYAYAASHA SHAQAALAHA
Mashiinkayaga 'Hydraulic Scrap Metal Shear Baler Machine' wuxuu bixiyaa qaybo caan ah oo mashiin caan ah, waxaan la shaqeyneynay shirkado badan oo caan ah oo caan ah, sida SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI iyo wixii ka badan 10 sano
HABRAACA wax soo saar
Nooca ugu yar YDJ Series Hydraulic Scrap Birta xiir Baler Mashiinka ayaa si fiican loogu ilaalin karaa hal weel 40 HQ. Haddii aan doonnida ku raranno, waxaan dabooli doonnaa poncho iyo Load skax si loo ilaaliyo YDJ Series Mashiinka Kaydinta Qalabka Mashiinka Baler-ka.
Halkan ka daawo Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xaraashka ee Kombiyuutarka ee Dib-u-warshadaynta Birta ee Waxqabadka!
Hore: Qaab No: Mashiinka NY ee mashiinka xiraha mashiinka kulul ee dareeraha ah
Xiga: Qaab No: Maareynta Buugga Soo-saarista Shiinaha ee Y82 Taxanaha Vertical Hydraulic non-metal Press Baler Machine
Hc43-1600 Mashiinka Shear Alligator
Mashiinka Xiirashada Qalabka Xaraashka ee Haydarooliga
Mashiinka Birta Briquette, Sheet Birta Baler, Baler Xadhig Baler, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah, Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger,